ငါအလိုရှိ၏ - သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေ | I Will - Be Thou Clean! | Real Conversion
ငါအလိုရှိ၏ - သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေ
I WILL - BE THOU CLEAN!
မတ်လ ( ၁ ) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
"နူနာစွဲသောသူတစ်ယောက်သည် အထံတော်သို့လာ၍ ဒူးထောက်လျက်၊ ကိုယ်တော်အလိုတော်ရှိလျှင် ကျွန်တော်ကိုသန့်ရှင်းစေနိူင်တော်မူသည် ဟု တောင်းပန်လေ၏။ ယေရှုသည် သနားသောစိတ်ရှိသဖြင့် လက်တော်ကိုဆန့် ၍ ထိုသူကို တို့လျက်၊ ငါအလိုရှိ၏။ သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေဟု မိန့်တော်မူ ၏။ ထိုသို့မိန့်တော်မူသည့် ခဏခြင်းတွင် နူနာပျောက်၍ သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်လေ၏။" (မာကု ၁း ၄၀-၄၂ )
မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းဖတ်ရှုရသည်ကို ကျွန်ုပ်နှစ်သက်လှပါသည်။ ၎င်း၏ဟေဗြဲနာမည် မှာ ယောဟန်ဖြစ်သည်။ မာကုဟူသည်မှာ သူ၏ ''Marcus" ဟူသော လက်တင်နာမည်ပင်ဖြစ် ပါသည်။ ယောဟန်မာကုမှာ တမန်တော်ပေတရု၏ ဝိညာဉ်သားပင်ဖြစ်ပါသည်။ ပေတရုက ၎င်းအား "ငါ့သား မာကု" ဟုခေါ်ထားပါသည်။( ၁ပေ ၅း ၁၃ ) ကနဦးအသင်းတော်ဖခင်မှာ ပါပရ ( ၇၀-၁၆၃ ) ဖြစ်ပြီး ၎င်းက"မာကုသည် ၎င်း၏ခရစ်ဝင်ကျမ်းများကို ပေတရုထံမှ လက်ခံ ရရှိသည်ဟုဆိုပါသည်။ ပါပရက ပေတရု၏အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သောမာကုသည် ရှင်ပေတရု စုစီး သမျှကို အကုန်အစင်ရေးသားခဲ့သည်" ဟုဆိုထားခဲ့သည်။ Justin Martyr (၁၀၀-၁၆၅) ကလည်း မာကုသည် ဤခရစ်ဝင်ကျမ်းကို ပေတရု၏စကားလုံးများမှ ရေးချထားသည်ဟု ဆို ထားသည်။ အခြားအသင်းတော်ဖခင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Eusebius (၂၆၃-၃၃၉) ကလည်း "မာကု သည် ပေတရုထံမှ သူတို့ကြားသိလက်ခံခဲ့ကြသော ခံယူချက်များကို ရေးသားချက်များတွင် ချန်လှစ်ထားခဲ့သည်" ဟု ကနဦးခရစ်ယာန်များက စွက်စွဲ ကြကြောင်းဆိုထားသည်။
ပေတရုသည် လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်မှုရှိသောသူဖြစ်၍ မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းသည် လှုပ် ရှားတက်ကြွမှုရှိသောကျမ်းဖြစ်သည်။ ဤခရစ်ဝင်ကျမ်းသည် လှုပ်ရှားတက်ကြွမှုရှိသော ရောမ လူမျိုးများအတွက်အဓိကထားရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် "နှင့်" ဟူ သောစကားလုံးကို ၁၃၃၁ ကြိမ်တွေ့ရှိရသည်။ "ဖြောင့်ဖြောင့်" သို့မဟုတ် "ချက်ချင်း" ဟူသောစကားလုံးသည်လည်း ထပ်ခါထပ်ခါ တွေ့ရသည်။ "နှင့်" ဟူသောစကားလုံးက ဆက် လက်လုပ်ဆောင်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုထားသောကျမ်းချက် ၅ ပိုဒ်ကလည်း "နှင့်" ဟူသောစကားလုံးဖြင့်ဦးဆောင်ထားသည်ကို သတိပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုထားသည့် ကျမ်းပိုဒ်၏ ၃ ပိုဒ်တွင် "နှင့်"ဖြင့်အစပြုထားပါသည်။
"နူနာစွဲသောသူတစ်ယောက်သည် အထံတော်သို့လာ၍"(အပိုဒ်- ၄၀ )
" "ယေရှုသည် သနားသောစိတ်ရှိသဖြင့်" (အပိုဒ် ၄၁ )
"ထိုသုိ႔မိန့်တော်မူသည့် ခဏခြင်းတွင္ နူနာပျောက်၍ သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်လေ၏။" (အပိုဒ် ၄၂ )
ရောမလူမျိုးများက တန်ခိုးနှင့်လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ယုံကြည်ကြပါသည်။ မာကုခရစ် ဝင်ကျမ်းသည် အခန်းကြီး ၁၆ ခန်းသာရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ယေရှုခရစ်၏တန်ခိုးနှင့်လွှမ်းခြုံ ထားပါသည်။ ခရစ်တော်နှင့် ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကျမ်းပိုဒ်ရှည်နှင့်ဓမ္မဟောင်းကျမ်း ကိုးကားချက်များဖြင့် ဖော်ပြမထားပါ။ မာကုသည် ယေရှု၏တန်ခိုးနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့အားခင်းကျင်းပြသထားသည်ဖြစ်၍၊ မာကု၏ရောမပရိသတ်များအားလျှောက်ထား သည့် အောက်ပါအချက်များကို ချန်လှစ်ထားပါသည်။
မာကုအခန်းကြီး ၁ တွင် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုအဘယ်မျှလောက်ရှိသည်ကို သတိ ပြုပါ။
သဲကန္တာရ၌ ယေရှုကြုံတွေ့သည့် စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကျမ်းပိုဒ်ရှိ နူနာစွဲသောသူကို ကျန်းမာစေခြင်း
ခရစ်တော်သည် လုပ်ဆောင်မှုနှင့်တန်ခိုးရှိသောသူအဖြစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့အပြင် ၎င်း၏လုပ် ဆောင်မှုနှင့် တန်ခိုးက သင့်အား ဤမနက်တွင်ပင် ကယ်တင်နိူင်ပါသည်။
ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြောက်ရွံ့ခြင်းကို ကွယ်ကာသောနာမတော်
ဤသည်မှာ အပြစ်သားများနားတွင် ကြားသိရသောတေးသံဖြစ်သည်။
(ထောင်ပေါင်းများစွာသောစကား", ချားလ်ဝယ်စလီ ၁၇၀၇-၁၇၈၈ ရေးသားသည်။)
မာကုအခန်းကြီး ၁ တွင် အဓိကအဖြစ်အပျက် ကိုးခုကို တင်ပြထားပါသည်။ ဒေါက်တာ McGee က "မာကုအခန်းကြီးတစ်တွင် ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁ မှလွဲ၍ သမ္မာကျမ်းစာရှိ အခြားကျမ်းများထက် အကြောင်းအရာများစွာပါဝင်နိူင်ပါသည်" ဟုဆိုထားသည်။ (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, အတွဲ ၄၊ သောမတ်စ်နယ်လ်ဆင်၊ ၁၉၈၃၊ စာ-၁၆၁)
ထိုအချက်က ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်သည် နူနာအားကျန်းမာစေခြင်းအ ထိဖြစ်လာပါသည်။
ဤကျမ်းပိုဒ်မှ အရေးကြီးသည့် အချက်သုံးချက်ကို လေ့လာသင်ယူကြပါစို့။
၁။ ပထမအချက် - လူတစ်ဦးသည် နူနာစွဲနေသည်။
ဝတ်ပြုရာကျမ်းအခန်းကြီး ဆယ့်သုံး နှင့် ဆယ့်လေးက ကြောက်မက်ဖွယ်ရာနူနာစွဲခြင် အကြောင်းကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ၎င်းက ခေတ်သစ်နူနာစွဲခြင်းအပါအဝင် အရေပြားရောဂါ အကြောင်းကို ဖော်ပြထားပါသည်။ အနက်ဖွင့်သူတစ်ဦးက ဤလူတွင် မှန်ကန်သောနူနာ သို့မ ဟုတ် အပိုဒ်ငယ်လေးဆယ့်ငါးတွင် ဖောပြထားသည့် ကုသမရသောရောဂါဖြစ်ကြောင်းဆိုပါ သည်။ New Unger ကျမ်းစာအဘိဓာန်က "ဓမ္မသစ်လူအများစုတို့သည် ဟန်ဆင်စွဲသောရော ဂါကဲ့သို့ကူးစက်ကြသည်ကို သံသယရှိကြောင်း" ဆိုပါသည်။ (The New Unger's Bible Dictionary, Moody Press, ၁၉၈၈၊ စာ- ၃၀၇ )
ပြင်းထန်သောနူနာသည် ဤသူတွင်စွဲကပ်နေပြီး အရေပြားအဖြူရောင်နှင့် မလှုပ်မရှား နိူင်ဖြစ်ခြင်းတို့ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ သူ၏ကိုယ်ခန္ဒာအနှံတွင် ရောင်ရမ်းခြင်းများရှိသည်။ သူသည် ပြည်တည်မှုများရှိပြီး တစိမ့်စိမ့်ထွက်လျက်ရှိပါသည်။ ရောဂါသည် ၎င်း၏လက်ကို ကူးစက်လာသည်ဖြစ်၍၊ ခြေထောက်များသည်လည်း ရွဲ့စောင်းသည်။ တီဘီနှင့်ဆိုင်သော အနာများသည် မျက်နှာပေါ်တွင် ပေါ်ထွက်လာပြီး မျက်နှာပေါ်တွင် ကုလားကာကို ဝတ်ဆင်ရ သည့် "ဆင်လူသား" အလားဖြစ်နေပါသည်။ သူ၏အနာများသည် ထူထပ်လာပြီး နီနီရဲရဲဖြစ် လာပါသည်။ ထိုအရာမှာ မှန်ကန်သော နူနာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာကို ယခုတွင် ဟန်ဆင် ရောဂါဟုပင် လူသိများပါသည်။ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအရာပင်ဖြစ်သည်။ (The New Unger's Bible Dictionary, ၎င်း၊ တွင်ကြည့်ပါ။)
Dr. Walter L. Wilson က ဤရောဂါသည် အပြစ်ရောဂါဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ၄င်သည် ကုသ၍မရနိူင်သောရောဂါပင်ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် နူနာသည် သန့်ရှင်း ခြင်းသို့ရောက်ရမည်။ အကြောင်းမှာ အနာရောဂါသည် ကူးစက်တတ်သဖြင့် နူနာစွဲသူသည် သီးသန့်နေရပါသည်။ သူသည် ပါးစပ်တွင် အဝတ်ကို ပတ်လျက် "မသန့်ရှင်းပါ၊ မသန့်ရှင်းပါ" ဟုအော်ရပါသည်။ သူသည် မြို၏အပြင်ဘက်တွင်သာ အော်ဟစ်ရပါသည်။
ဤအရာအားလုံးသည် မသန့်ရှင်းသူများအားလုံးအတွက် မှန်ကန်ပါသည်။ သူသည် အသင်းတော်ဝင်မဖြစ်နိူင်ပါသည်။ သူသည် အပြစ်အနာရောဂါကြောင့် ကောင်းကင်သို့မဝင် ရောက်နိူင်ပါသည်။ (Walter L. Wilson, M.D., A Dictionary of Bible Types, Hendrickson Publishers, ၁၉၉၉၊ စာ-၂၅၇ ) ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၃း ၄၅၊ ၄၆ က ဤသို့ဆို သည်။
"နူနာစွဲသောသူသည် စုတ်သောအဝတ်ကို ဝတ်ရမည်။ ခေါင်းကိုမဖုံး၊ အထက်နှုတ်ခမ်းကို ဖုံးလျက်၊ မစင်ကြယ်၊ မစင်ကြယ် ဟု ဟစ်ကြော်ရ မည်။ ထိုအနာစွဲသည့် ကာလပတ်လုံး သူသည် ညစ်ညူး၏။ မစင်ကြယ် သည်ဖြစ်၍၊ တစ်ယောက်တည်းနေရမည်။ သူ့နေရာသည် တပ်ပြင်မှာ ရှိရ မည်။" ( ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၃း ၄၅၊ ၄၆ )
Scofield က ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၃း ၁ ကို " နူနာသည် အပြစ်ကို ( ၁) အသွေးထဲတွင်ရှိသကဲ့သို့၊ (၂) လူသိရှင်ကြား ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်သည်၊ ( ၃ ) လူ့နည်းလမ်းအားဖြင့် ကုသမရနိူင်ကြောင်း" စသဖြင့် မှတ်တမ်းပြုထားသည်။ (The Scofield Study Bible, အော့စ် ဖို့သက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်၊ ၁၉၁၇၊ စာ-၁၄၁၊ ဝတ်ပြု ၁၃း ၁ နှင့်ပါတ်သက်၍ မှတ်စုတို )
နူနာဟူသည်မှာ လူသား၏လုံးဝပျက်စီးခြင်းကို သရုပ်ဖော်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လုံး၀ ပျက်စီးခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသွေးသားထဲသို့ အာဒံမှ စီးဆင်းလာပါသည်။ ထိုအရာမှာ သေးငယ်သောစကားနားမထောင်ခြင်းမှ အစပြုပြီး နောက်ဆုံးတွင် စက်ဆုတ်ဖွယ်ရာဖြစ်လာပါ တော့သည်။
"ဇာတိပကတိစိတ်သဘောသည် ဘုရားသခင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။" ( ရောမ ၈း ၇ )
ထို့အပြင် သမ္မာကျမ်းစာက အောက်ပါအတိုင်းဆိုထားပြန်သည်။
"နားလည်သောသူမရှိ၊ ဘုရားသခင်ကို ရှာသောသူမရှိ။ လူအပေါင်းတို့သည် လမ်းလွဲကြပြီ။ တညီတညွှတ်တည်းအသုံးမရသောသူဖြစ်ကြသည်။ ကောင်း သောအကျင့်ကို ကျင့်သောသူမရှိ။ တယောက်မျှမရှိ။"(ရောမ ၃း ၁၁-၁၂ )
ဂျွန်ဝယ်စလီ ( ၁၇၀၃-၁၇၉၁ ) သည် ကယ်လဗင်းယုံကြည်သူမဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် ဤ ကျမ်းပိုဒ်နှင့်ပါတ်သက်ပြီး သူက မယုံကြည်သူများသည် "အကူအညီမဲ့နေသူများ၊ အရေးကြီးသူ များ၊ မိမိကိုယ်ကို သို့မဟုတ် အခြားသူများအတွက် အကျိုးမပြုနိူင်သူများဖြစ်ကြောင်း….. လူသားအားလုံးသည် အပြစ်နှင့် ၎င်းအပြစ်၏တန်ခိုးအောက်တွင် ရှိနေကြောင်းဆိုပါသည်။ ရောမ ၃း ၁၂ ၊ ၉ မှတ်စု ( ဂျွန်ဝယ်စလီ၊ M.A., Explanatory Notes Upon the New Testament, အတွဲ ၂၊ Baker Book House, ၁၉၈၃၊ စာ- ၃၃၊ ၃၄၊ )
Dr. Martyn Lloyd-Jones ( ၁၈၉၉-၁၉၈၁ ) က " လူသည် အပြစ်ထဲတွင်ရှိနေပြီး ထိုအပြစ်၏ အုပ်စိုးမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုကို ခံနေရသည်" ဟုဆိုပါသည်။ (Martyn Lloyd-Jones, M. D., Assurance, Romans 5, The Banner of Truth Trust, ၁၉၇၁၊ စာ- ၃၀၆ )
Dr. Isaac Watts က ၎င်း၏တေးသီချင်းတွင် ဤသို့ရေးထားသည်။
ကိုယ်တော်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်သည် ယုတ်မာပြီ အပြစ်နှင့်မွေးလာ မသန့်ရှင်းမစင်ကြယ်ပါ။
ပြစ်မှားသောသူ၏အပြစ်သည် လူသားအလုံးကု လွှမ်းခြုံဖျက်စီးသွား
မျက်မှောက်တောသို့ ကျွန်ုပ်တုးိးဝင်ချဉ်းကပ်လာပြီး၊ ကျေါ်ဇူးတော် ကျွန်ုပ်ခိုလှုံရာ
အပြင်သဏ္ဍာန်ကျွန်ုပ်အားမပြောင်းလဲစေပါ။ အနာရောက ကျွန်ုပ်၌ရှိသည်။
( ဆာလံ ၅၁၊ Isaac Watts D.D., ၁၆၇၄-၁၇၄၈ ရေးသားသည်။ )
အပြစ်သည် စိတ်နှလုံးကို မှောင်မိုက်စေသည်။ " အရှုံးပေးရမည့်အရာများစွာရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ဖြစ်လာလျှင် များစွာသောအရာတို့ကို လက် မြှောက်အရှုံးပေးရမည်" ဟု သင့်အားထင်မြင်ယူဆစေသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် ထာဝရ ကာလတိုင်အောင် အပြစ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိလျက်နေသည်။ သို့မဟုတ် အပြစ်က သင့်အား "ကျွန်ုပ်သည် ဘုရားကျောင်းသို့အမြဲသွားသည်၊ ကျွန်ုပ်မှန်ကန်သည်" ဟု ထင်မြင်ယူ ဆစေမည်။ သို့ဖြစ်၍ မျှော်လင့်ချက်လုံးဝမရှိတော့သည့် အပြစ်နူနာစွဲကပ်ခြင်းဆီသို့ သင်သွားရ ပေမည်။ သို့မဟုတ် အပြစ်တရားက "ကျွန်ုပ်သည် ကယ်တင်ခြင်းရကြောင်းကို ပုံသက်သေပြ ရန် ခံစားချက်ရှိရမည်" ထင်မှတ်စေမည်။ သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာက ကယ်တင်ခြင်းသည် ခံစားချက်အားဖြင့်ဖြစ်သည်ဟု လုံး၀ဖော်ပြမထားပါ။ ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းအား ဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်ပါ၏။ ယေရှုကိုယုံကြည်ကိုးစားမည့်အစား ခံစားချက်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် အချို့သည် လပေါင်းများစွာ၊ အချို့တို့သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်ခဲ့သည်။ သူတို့စိတ်နှလုံးသာ အပြစ်နူနာက ဖျက်ဆီးသွားခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ Augustus Toplady က ၎င်းရေးသားသည့် သီးချင်းတစ်ပုဒ်တွင် ဤသို့ဆိုသည်။
သံသယ၊ ယူဆချက်များ၊ ပရိယာယ်များလှမယာများ
မာန်မာန၊ အမုန်းရန်ငြှိုး၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းများစွာ
("နှလုံးသား" Augustus Toplady ၁၇၄၀-၁၇၇၈ ရေးစပ်သည်။ )
ဆက်လက်၍ Dr. Watts ကဆိုသည်မှာ
"အပြင်ပိုင်းလုပ်ဆောင်မှုများ ကျွန်ုပ်ကို မစင်ကြယ်စေပါ။
နူနာသည် အတွင်းထဲ၌ ရှိလျက်နေသည်။"
"အပြစ်သားတို့ဆုတောင်းခြင်း" သည်လည်း သင်၏အသက်တာကို ကောင်းမွန်စေခြင်းမရှိနိူင် ရာ။ လူလေးတစ်ယောက်က ကျွန်ုပ်အားပြောဆိုသည်မှာ " ကျွန်ုပ်သည် ဆုတောင်ချက်ကိုသာ ရွက်ဆိုနိူင်သည်၊ ထို့ကြောင့် အပြင်ထွက်ပြီး ကစားနိူင်သည်" ဟု ကျွန်ုပ်အားပြောဆိုခဲ့သည်။ ထိုသို့သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှ ကယ်တင်သောအမှုကို မပြုနိူင်ပေ။ အခြားသူများသည် အစီအ စဉ်အဆုံးတွင် "ဆက်ကပ်" ရန် "ရှေ့သို့လာကြပါသည်။ ထိုအရာကလည်း ကောင်းသောအရာ ကိုမလုပ်ဆောင်နိူင်ပါ။ ထိုသို့သောအရာများသည် မှားယွင်းပြီး အချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်သော "အပြင်ပိုင်းပုံသဏ္ဍာန်" သာဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော ကျမ်းပိုဒ်ထဲမှ ဆင်းရဲသားနူနာစွဲသူ၏ အကြောင်းတရား ပင်ဖြစ်သည်။ ဤသူသည် နူနာစွဲနေသူဖြစ်သည်။ သူလုပ်ဆောင်နိူင်သောအရာ သို့မဟုတ် ပြောဆိုသောအရာများသည် ၎င်းအား မစင်ကြယ်စေနိူင်ကြောင်းကို သူသိရှိခဲ့သည်။
၂။ ဒုတိယအချက် - ထိုသူသည် ယေရှုထံသို့လာသည်။
"နူနာစွဲသောသူတစ်ယောက်သည် အထံတော်သို့လာ၍ ဒူးထောက်လျက်၊ ကိုယ်တော်အလိုတော်ရှိလျှင် ကျွန်တော်ကိုသန့်ရှင်းစေနိူင်တော်မူသည် ဟု တောင်းပန်လေ၏။" (မာကု ၁း ၄၀ )
ဤဆင်းရဲသားနူနာစွဲသူသည် ယေရှုအကြောင်းကို သံသယကင်းကင်းဖြင့် ကြားသိရသည်။ ဂျွန်ဝယ်စလီက သူသည် ယေရှုတရားဟောသည်ကိုပင်ကြားခဲ့နိူင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဝယ်စလီ က "ဤနူနာစွဲသူသည် လူများနှင့်အတူမနေရသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သခင်၏အကြောင်းကို အ ဝေးမှကြားသိရပေမည်" ဟုဆိုသည်။ ( ၎င်း ) မစ္စတာဝယ်စလီသည် လူပေါင်းများစွာက သူ၏ တရားဟောချက်ကို နားထောင်ရန် အဝေးမှလာကြပြီး ကယ်တင်ခြင်းရရှိသောကြောင့် ထိုသို့ သောအရာကို သိရှိပေလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာ ဂျွန်ဝယ်စလီထံသို့ ၁၇၄၅ ခုနှစ်ကရေးသားထား သည့် စာပင်ဖြစ်ပါသည်။
သင်၏ညီ(ချားလ်) နှင့်သင့်အားကြားသိရသည်အထိ မိမိကိုယ်ကို မသိရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် မယုံကြည်သူဖြစ်ကြောင်းသိလာသောအခါ ခရစ်တော်မှတပါး ကျွန်ုပ်ကို ကူညီနိူင်သောသူမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်သည် သူ့ထံသို့ ငိုကြွေးပြီး သူသည် ကျွန်ုပ်၏အော်ဟစ်သံကို ကြားသဖြင့် "သင်၏အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်တော်မူ ပြီ၊ ငြိမ်ဝပ်စွာသွားလော့" ဟု ကျွန်ုပ်နှလုံးသားထဲသို့ စကားပြောလာသည်။ (John Wesley, အတွဲ ၁၊ Baker Book House, ၁၉၇၉၊ စာ-၅၂၇ )
ထိုအချက်မှာ ယေရှုသည် နူနာစွဲသူအား အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်သောအရာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သင်သည် မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချပြီး ခရစ်တော်ကိုကိုးစားလျှင် နူနာစွဲသောသူအားပြုသ ကဲ့သို့ သင့်အသက်တွင်လည်း ပြုတော်မူမည်။
၃။ တတိယအချက် - ထိုသူကို သန့်ရှင်းစေသည်။
ပင်္တေကုတ္တိအသင်းတော်နှင့် ခါရေ့မက်တစ် "အနာငြိမ်းသူများ" အကြောင်းနှင့်ပါတ် သက်၍ စကားလုံးအနည်းငယ် ကျွန်ုပ်ပြောရမည်။ အဓိကလုပ်ဆောင်ထားသည့် အရာသည် ကိုယ်ကာယအနာငြိမ်းခြင်းဖြစ်သည့်အချိန်တွင် ဧဝံဂေလိတရား၏တန်ခိုးသည် ပိတ်ပင်ထား ပြီး လုံးဝချန်လှစ်ထားရပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူတစ်ဦး၏ကိုယ်ကာယအနာငြိမ်းခြင်းကို အ ဓိကထားရမည်မဟုတ်။ ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံရသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ နားကိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် အာသီးရောင်ရောဂါကို ကုသရန်မဟုတ် အပြစ်နူနာစွဲခြင်းမှ ကယ်တင်ရန် ဖြစ်သည်။ "အနာငြိမ်သူများ" အားပြောဆိုသည့်အချိန်တွင် Dr. A. W. Tozer (၁၈၉၇-၁၉၆၃) က ဤသို့ဆိုထားသည်။
ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကိုးစားနေမည့်အစား မိမိအတွေ့အကြုံကိုမှီခိုအား ထားလျက် အရှက်မဲ့စွာ စိတ်ဝေဒနာရှင်ကဲ့သို့ဖြစ်စေသည်။ ဝိညာဉ်တော်၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှ ဇာတိပကတိ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို ခွဲခြားသိမြင်ရန် အ စွမ်းအစလည်း မရှိတတ်ပေ။ (A. W. Tozer, D.D., Keys to the Deeper Life, Zondervan Publishing House, n.d., စာ- ၄၁၊ ၄၂ )
ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဒာကို အနာငြိမ်စေနိူင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်ယုံ ကြည်ပါသည်။ သူလုပ်ဆောင်နိူင်လိမ့်မည်ဟု အတိအကျယုံကြည်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ခန္ဒာကို အနာငြိမ်းစေခြင်းနှင့် အပြစ်ပြည့်နေသည့် ဝိညာဉ်အနာငြိမ်းခြင်း ကြားတွင် ရှိသောအရာကား အဘယ်နည်း။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ရွေးချယ်ရမည်မှာ လွယ်ကူ ပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်သည် မကြာခင်မှာပင် ပျက်စီးလွင့်ပျယ်သွားမည်။ သို့သော် ဝိညာဉ်မူကား ထာဝရကာလတိုင် တည်ရှိနေပေမည်။ အဘယ်အရာသည် ပို၍အရေးကြီ သည်ကို ရွေးချယ်ရန်မှာ လွယ်ကူလှပါသည်။
ဤပုံပြင်လေးတွင် နူနာစွဲသူသည် ကိုယ်ကာယသာမက ဝိညာဉ်အနာငြိမ်းခြင်း ကိုရရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့သိမြင်ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၏သွန်သင်ချက် များကို အခြားနည်းလမ်းဖြင့်ပြောဆိုနိူင်ပါသည်။
"လူသည် ဤစကြာဝဠာကိုအကြွင်းမဲ့အစိုးရ၍ ( ကိုယ်ကာယကျန်းမာခြင်းအ ပါအဝင်) မိမိအသက်ဝိညာဉ်ဆုံးလျှင် အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်း။" ( မဿဲ ၈း ၃၆ )
ဤသူက သူ၏နူနာစွဲနေမှုသည် နက်နဲသောအရာတစ်စုံတစ်ခု၏အမှတ်အသားဖြစ် သည်ကိုနားမလည်ခဲ့ပါ။ ယေရှုအား အနာငြိမ်းစေရန် မတောင်းဆိုခဲ့ပါ။ သူက "သခင်အလိုရှိ လျှင် သန့်ရှင်းစေနိူင်သည်"ဟုသာဆိုသည်။ သူသည် "ပျက်စီးတတ်သောအစာကို မရှာဖွေခဲ့ ပါ"။ "နူနာရောဂါသည် အတွင်းတွင်သာရှိပါသည်။" ထိုသို့သောအကြောင်းတရားကြောင့် ယေရှုသည် ၎င်းအား လျှင်လျှင်မြန်မြန်ဖြင့် အံ့ဘွယ်ရာဖြစ်အောင် ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။
"ကိုယ်တော်အလိုတော်ရှိလျှင် ကျွန်တော်ကိုသန့်ရှင်းစေနိူင်တော်မူသည်။" (မာကု ၁း ၄၀ )
""ယေရှုသည် သနားသောစိတ်ရှိသဖြင့် လက်တော်ကိုဆန့် ၍ ထိုသူကို တို့လျက်၊ ငါအလိုရှိ၏။ သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေဟု မိန့်တော်မူ ၏။" (မာကု ၁း ၄၁ )
ထိုနောက် သူသည် ချက်ချင်းပင် "စင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်သွားသည်။" (မာကု ၁း ၄၂ )
ထိုအရာက ဧဝံဂေလိတရား၏တန်ခိုးကို ပြသသွားပါသည်။ ယေရှုသည် သင်၏အပြစ် အားလုံးကို ဆေးကြောစင်ကြယ်စေရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသွေးသွန်းလောင်းခဲ့သည်။ ယေရှုသည် သင့်အား ထာဝရအသက်ကိုပေးရန် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ ယေရှုထံပါးသို့ ရိုးစင်းသောယုံကြည်ခြင်းနှင့်ရောက်ရှိလာလျှင် ယေရှုက ချက်ချင်းပင် ကယ် တင်တော်မူလိမ့်မည်။ ထိုအရာသည် ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ကြီးမားသည့် သတင်းစကားပင်ဖြစ်ပါ သည်။ "အလိုတော်ရှိလျှင် သန့်ရှင်းစေနိူင်ပါသည်၊ ငါအလိုရှိသည်။ သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေ၊ သူသည် သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်လေသည်။" ထိုအရာမှာ ဧဝံဂေလိတရားပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအရာမှာ ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ ထိုအရာမှာ သင်၏မျှော် လင့်ချက်ဖြစ်သည်။ "ယေရှု၊ အလိုတော်ရှိလျှင်၊ သန့်ရှင်းစေနိူင်သည်၊" "ငါအလိုရှိ၏၊ သန့်ရှင်း ခြင်းသို့ရောက်စေ၊" ခရစ်တော်ထံသို့လာပါ။ ယုံကြည်ကိုးစားပါ။ ယေရှုကို ယုံကြည်ကိုးစားရန် မှာ လွယ်ကူသောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် သင့်အား ချက်ချင်းပင် နူနာစွဲသူအား ပြုသကဲ့သို့ သန့်ရှင်းစေမူမည်။ နောက်ထပ်စောင့်ဆိုင်းစရာမလိုအပ်တော့ပါ။ ယေရှုကို ယုံကြည်ကိုးစားပြီး သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်လော့။ ခမည်းတော်ဘုရား၊ ယနေ့နံနက်တွင် တစ်စုံ တစ်ယောက်သည် ယေရှုကို ယုံကြည်ကိုးစားပြီး အသွေးတော်အားဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက် မည်အကြောင်း ဆုတောင်းပါ၏။ အာမင်။
("ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်သိသည်"၊ Anna W. Waterman ၁၉၂၀ ရေးစပ်သည် )
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို Mr. Abel Prudhomme ကဆောင်ရွက်သည်။ မာကု ၁း ၄၀-၄၂
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ Mr. Benjamin Kincaid Griffith ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသည်။ “ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်သိသည်”၊
Anna W. Waterman, ၁၉၂၀ ရေးစပ်သည်။ )
ငါအလိုရှိ၏ - သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေ အကျဉ်းချုပ်
( ၁ပေတရု ၅း ၁၃ )
၁။ ပထမအချက် - လူတစ်ဦးသည် နူနာစွဲနေသည်။ ဝတ် ၁၃း ၄၅၊ ၄၆၊ ရောမ ၈း ၇၊ ၃း ၁၁-၁၂
၂။ ဒုတိယအချက် - ထိုသူသည် ယေရှုထံသို့လာသည်။ မာကု ၁း ၄၀
၃။ တတိယအချက် - ထိုသူကို သန့်ရှင်းစေသည်။ မာကု ၈း ၃၆၊ ၁း ၄၀၊ ၄၁၊ ၄၂